Global Voices teny Malagasy » Zambia: Miresaka ny Tokony Hizaràna Fimailo Any Am-ponja Ireo Siokantserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Avrily 2011 7:55 GMT 1	 · Mpanoratra Gershom Ndhlovu Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Zambia, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika
Ny olana tahaka ny VIH/SIDA sy ny olona mitovy nefa mifanambady dia olan'ny fihetseham-po any Zambia. Iry voalohany dia naka aina maro tato anatin'ny dimiambiroapolo taona farany ary itsy farany dia olana tsy sahin'ny olona resahana imasom-bahoaka akory.
Tato ho ato ny mpitarika ny antoko mpanohitra lehibe indrindra eto amin'ny firenena vao sahy niteny fa mankato ny fifanambadian'ny olona mitovy ny lalàna Zambiana , fanambarana iray izay nezahan'ny antoko MMD eo amin'ny fitondrana, ireo fikambanana tsy miankina ONG ary Kristiana nampiasaina hanilihana azy amin'ny fifidianana.
Ny mahatonga ny fifanambadian'ny olona mitovy ho lasa resaka mafampana dia satria firenena Kristiana i Zambia, izay voafaritra rahateo ao anatin'ny savaranonandon'ny lalampanorenan'ny repoblika. Ny sasany tamin'ireo Zambiana tao amin'ny Twitter, na izany aza, dia nanasongadina endrika iray mahaliana amin'ilay adihevitra mikasika ny fifanambadian'ny olona mitovy – hoe tokony haparitaka any amin'ireo fonja Zambiana ny fimailo, toerana izay fantatra fa isian'ny fampiharana ny sodomia (firaisana amin'ny lava-body).
Ireto ambany ireto ny fifanakalozan-dresaka momba ny fifanambadian'ny olona mitovy sy ny VIH/SIDA ary ny fanapariahana ny fimailo any amin'ny fonja Zambiana.
Tsy azonareo atao ny ho tompondakan'ny fampiakarana ny famatsiam-bola hiadiana amin'ny VIH & minia mikimpy tsy hahita ny mahazo ireo voafonja izay miatrika zava-doza ho an'ny fahasalamany.
Ampandefero kely aloha ilay resaka ara-moralinareo & jereo ny zava-misy momba ny fianahan'ny VIH any am-ponja eo amin'ireo samy gadra. Mba olombelona koa ireny.
@missbwalya marina izany, i Zed ve no tiana resahana amin'io? [Zambia]
Fimailo be iray eo amin'ny tsangambato ao Buenos Aires, Arzantina ho fankalazana ny Andro Erantany iadiana amin'ny SIDA, sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr, Erik Stattin (CC BY-SA 2.0).
Avy aiza tao Bwalya io. Lalàna toa inona no any aminareo?
Avy amin'ireo Zambiana miafina ao anatin'ny fitafy rebareban'ny mpitsara io, izay mandà ny hetsiky ny MSM any am-ponja & tsy fahampian'ny fisorohana ny VIH.
Lohahevitra mandraikitra ity. Tsy zavatra mbola tsy ara-dalàna moa izao ny fifanambadian'ny olona mitovy any Zambia?
Mahafantatra tsara an'i Zambia, mandra-pihevitra azy io tsy ho toy ny heloka bevava dia hotohizan-dry zareo hatrany ny tsy hijery an'io ary hiteny hoe “ni zabo” (Eo indrindra no olana). Tsy afaka ny handresy.
Vintan-dratsy ny fitrangan'izany. Aza adino fa mbola mirehitra hatrany ao anatintsika ny resaka mpamosavy & mpanandro. Mbola lavitra ny làlan-kizorantsika hialàna amin'ny vanim-potoanan'ny pai-bato.
Izay indrindra, ny fizaràna fimailo any am-ponja dia azo raisina ho fanekena an-kolaka ny fifanambadian'ny olona mitovy ao Zambia. Asa ilàna fahasahiana izany.
LPM [ny filoha Zambiana farany teo Levy Mwanawasa] dia niteny imasom-bahoaka ny momba ilay olana & miantso fiovàna. Tsy azo antoka hoe hatraiza no hiafarany'izay.
Nanomana mialoha ny kianja ve ry zareo? Raha ny fantatsika aloha dia nandroso ny resaka vavaka ry zareo handroahana ny devolin'ireo gadra ‘lahy manambady lahy’. #bwafya  [olana io]
Tsy tadidiko ny antsipirihan'ny adihevitra saingy tsara ny niresahany azy io amin'ny fijerena tahaka izay efa fanao mahazatra antsika!
Mihatra izany ho an'i Zambia & toerana hafa izay ny aina no manefa amin'ny tsy firaharahana tafahoatra.
Tsy dia azo akarina ambony loatra ny maha-zava-dehibe ity fifanakalozan-dresaka anaty Twitter ity. Misy tsaho mandeha fa hoe mihanaka be ny fanaovana sodomia any amin'ireo fonja any Zambia, izay ny maro aminy dia naorina talohan'ny taona 1964 fony mbola latsaky ny efatra tapitrisa no isan'ny mponina. Miaraka amin'ny mponina efa manakaiky ny 14 tapitrisa amin'izao fotoana, tsy maharaka intsony ireo fonja manerana ny firenena.
Maro amin'ireo nifonja fahiny no mivoaka ny fonja miaraka amin'ny aretina maro samihafa toy ny VIH/SIDA, tioberkilaozy ary aretin-koditra; maro amin'izy ireny no tsy miaina ela aorian'ny nahafahany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/22/16569/
 sahy niteny fa mankato ny fifanambadian'ny olona mitovy ny lalàna Zambiana: https://globalvoicesonline.org/2011/03/21/zambia-opposition-leader-risks-his-political-neck-over-gays/